नेपालमा चर्च बने अमेरिकामा गुम्बा - सुर्य बज्रयाना - Khojtalasnepal
नेपाली मूर्तिकारले बनाएको १८ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति अमेरिकास्थित एक गुम्बामा राख्न लागेको समाचार आएको छ ।अमेरिकाको सानफ्रान्स्किोमा रहेको चर्चलाई गुम्बा बनाएर बुद्धको मूर्ति राख्न लागिएको हो ।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको शाक्य ह्यान्डिक्राफ्टमा मूर्तिकार वीरेन्द्र अवालेको समूहले उक्त मूर्ति तयार गरेको थियोे ।
अमेरिका इसाईहरुको मुलक भनिन्छ । त्यहाँ जिसस क्राइस्टलाई मान्ने ठुलो संख्या छ । बदलिँदो बिश्व परिवेशमा बुद्धका उपदेशका कारण बौद्ध दर्शनप्रती मानिसहरूको आकर्षण बढेको छ । अमेरिका पनि त्यस्तै खालको बाताबरण बन्दै गएको स्थिति छ । विकसित देशहरूमा मानिसहरू बौद्ध परम्परासँग नजिकिरहेका छ्न ।
एकजना अध्येताका अनुसार नेपालमा बौद्ध धर्म छाडेर इसाई धर्मतिर लाग्ने मानिसहरू संख्या अत्याधिक बढेको छ । यो अनुमान लगाउन सकिन्छ हिन्दु धर्म त्यागेर इसाई हुने संख्या भन्दा बौद्ध धर्म त्यागेर इसाई हुने संख्या धेरै छ । बुद्धको अनुयायीको नाताले यस्ता कुराले मनमा छुन्छ ।
उच्च पहाड र हिमाली भुभागतिर बनेका चर्चमा जनजाती समुदायको उपस्थित धेरै हुनुको कारण बौद्ध परम्परालाई आजको समय अनुसार बिकास गर्न नसक्नु नै हो । दया , करुणा , अहिंसा , प्राणीहितका निम्ति हामीले बुद्ध जीवन दर्शनलाई ब्यबहारिक कार्यन्वयन गर्न सकेनौं । चीवर धारण गरेर मात्र असली बौद्ध हुन सकिदैन ।
विकसित मुलकतिर बौद्ध धर्म , दर्शन र परम्परातिर मानिसको आकर्षण बढनु र बुद्ध जन्मेकै देशमा चाहिँ इसाई बढ्नु तुलनात्मक अध्ययन गर्न आबस्यक छ । हाम्रा गुम्बाहरु कहाँनेर चुके , मानवहितको हाम्रो सपना कहाँ टुट्यो गम्भीर हुन आबस्यक छ ।
केही समय पहिला सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएका एकजना मित्र त्यहाको गुम्बा , हावामा हल्लिरहेको तोरण र मन्त्र पढिरहेका लामाहरु देखेर खुशी हुनु भएछ । एकबर्शपछी सिन्धुपाल्चोकको त्यहीँ गाउँ पुग्दा मित्रलाई पसिना छुटेछ । न त्यहाँ आकर्षक गुम्बा मानिसहरू थिए न लामाले उत्साहित भएर मन्त्र पढिरहेका थिए । अलि पर चर्चमा इसाई भजन गाएको चर्चा आवाज आइरहेको थियोे ।लामाश्री चाहिँ निगालोको चोया काटेर डोको बुन्दै थियोे । आफ्नु पुर्खौली पेशा धरापमा परेपछि उनलाई डोको बेचेर भएपनी घर चलाउन पर्ने बाध्यताले घर गरेको थियोे ।
आजको गाउँको वास्तविक यहि हो । कतिपय भन्छ्न हिन्दुहरुको जातीय अंहङ्कारले मानिसहरू धर्म परिवर्तन गरिरहेका छ्न । यसमा सत्यता पनि छ । तर जातीय छुवाछूत भेदभाव आदि नमान्ने बौद्ध समुदायचाहिँ किन चर्चतिर लागे त ? हामी जस्ता सचेत मानिसको मनमा यस्ता तथ्यले चसक्क घोच्छ ।
धर्म परिवर्तन पैसाको भरमा मात्र हुँदैन । कतिन्जेल पैसा बाडेर धर्म परिवर्तन गराउने ? मेरो विचारमा धर्म परिवर्तनको कारण चाहिँ सांस्कृतिक असमानता नै मुख्य कारण हो । हेपीएका , दविएका मानिसहरूले नयाँ धर्ममा चौतारी पाएको आभास गरेकै होलान । इसाईहरु हाम्रो समाजको यहि कमजोरी माथि फाइदा उठाइरहेका छ्न ।
अब हामी जाग्ने बेला आएको छ । हामीलाई अरुको धर्मप्रति आलोचनात्मक हुने फुर्सद छैन । हामी भित्र नै रहेका चरम असमानताको खाडल फुर्नुछ । अमेरिका पुगेका बुद्धलाई नेपालको माटोमा सजाउनुछ । बिश्वलाई चिनाउनुछ ।
WHR द्वारा नारायणी अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण ।
निम्बस ग्रुपद्वारा नेपाल पत्रकार महासघ पर्सालाई राहत सहयोग ।